Tani waa sida sawir-muuqaal -ku ugu shaqeeyo iTunes 12.5.1 | Waxaan ka socdaa mac
Javier Porcar | | iTunes, macOS Sierra, Tababarada, dhowr
Laga soo bilaabo shalay waxaan ku raaxeysan karnaa ikhtiyaarka ah sawir ku jira ee cusboonaysiinta iTunes ee nooca 12.5.1. Waxaan fileynay cusbooneysiinta boggan, sida ugu dhakhsaha badan ee loogu soo bandhigo dadka isticmaala. Dabcan, in kastoo aan soo dejisan karno iTunes 12.5.1 en Mac OS X Kabtan y MacOS Sierra, ikhtiyaarka ayaa la heli karaa oo keliya haddii aan maamusho MacOS Sierra.
Sawirka ku dhex jira sawirka runti waa mid wax ku ool ah si loo daawado filim ama fiidiyoow aan ku leenahay iTunes, inta aan qabanayno hawl kale.
Waxaan ku tijaabinay adoo ciyaaraya filim laga soo iibsaday iTunes-ka oo runti si fiican ayuu u shaqeeyaa, qaladaad la'aan ama jerik la'aan Waxaan sharaxeynaa sida loo helo:
Waxaan hubineynaa nooca iTunes, waa inuu noqdaa 12.5.1 ama ka sareeya. Waxaan had iyo jeer kala soo bixi karnaa nooca ugu dambeeya Mac App Store ama bogga Apple ee qeybta soo dejiso Itunes
Hadda waxaan doorannaa fiidiyow oo guji si aan ugu ciyaarno.
Dhinaca midig ee hoose, astaanta cusub ayaa soo muuqan doonta: shaashad yar oo ka muuqata mid weyn. Gujinaya gudihiisa waan awoodsiin doonnaa sawir ku jira
hadda waxaa haray oo kaliya in lagu waafajiyo qaybta shaashadda laga doonayo ama xitaa beddelkeeda la eego.
Xusuuso taas sawir ku jira Waa mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee 'MacOS Sierra' taasna waxaa loo heli karaa iTunes iyo Safari labadaba. Tani waa fariinta hordhaca ah ee Apple:
Hadda waxaad ka soo jiidi kartaa daaqad fiidiyoow ah Safari ama iTunes dusha miiska ama barnaamij qaab shaashad buuxda leh. Furo fiidiyowga meel gees ka mid ah miiska isla markaana ku hagaaji cabirka si aad u aragto waxa ka dambeeya. Sidan ayaad kuheleysaa taxanaha aad ugu jeceshahay adigoo hubinaya emaylka. Ama waxaad ciyaareysaa ciyaar inta kooxdaadu garoonka ku ciyaarayso.
Aragtidayda waa ficil aad u ficil ah oo sahlan in la isticmaalo (qaabka Apple) oo ka farxin doonta adeegsadayaal badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Tani waa sida sawirka sawirku uga shaqeeyo iTunes 12.5.1